Liverpool oo qandaraaska u kordhineysa labo ka mid ah xiddigaheeda ugu muhiimsan – Gool FM
Liverpool oo qandaraaska u kordhineysa labo ka mid ah xiddigaheeda ugu muhiimsan
(Liverpool) 04 Feb 2020. Kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa ku fikireysa in heshiis cusub ay ka saxiixato labadeeda xiddig kala ah Alisson iyo daafaceeda dhexe ee Virgil van Dijk.
Alisson Becker iyo Virgil van Dijk ayaa lagula wareegay £75million iyo £65m sanadii 2018, iyagoo qeyb ka ah shaxda joogtada ah ee Jurgen Klopp.
Daafaca dhexe ee qaranka Holland iyo goolhayaha Brazil, ayaa loo arkaa in ay laf dhabar u yihiin in muddo 30 sano ah kaddib Liverpool ay ku guuleysato horyaalka halka sidoo kale ay xagaagii tagay u suuragaliyeeeyn hanashada tartanka UEFA Champions League.
Sida laga soo xiganayo “Independent” Reds ayaa rajeeneysa in 28 sano jirkeeda daafaca dhexe iyo 27 sano jirkeeda goosha u qabta in ay ka saxiixato heshiis waqti dheer ah .
Waxaa la fahansan yahay in labadan ciyaaryahan ay doonayaan in qandraas cusub ay u saxiixan kooxdooda, taasoo waqti kale oo ay Anfield ku joogi karaan ka dhigan.
Daafacyada kala ah Trent Alexander-Arnold, Andy Robertson iyo Joe Gomez ayaa dhamantood heshiis cusub u saxiixay Reds 13-kii bilood ee ugu dambeeyay, xilli Liverpool laga dhaliyay 15 gool 25 kullan oo horyaalka Premier League ay ciyaartay.
Si kastaba ha noqotee, Liverpool ayaa 22 dhibcood ku jogaamineysa horyaalka Premier League xilli ciyaaredkan waxaana u dhiman kaliya 13 ciyaar.
RASMI: Sergio Aguero oo ku guuleystay abaal-marinta xiddiga bishii Janaayo ee Kooxda Manchester City
Saakay iyo Waxyaabihii ay Wargeysyadu ka qoreen Suuqa kala iibsiga Xiddigaha… (Pogba, Sane, Stones, Maddison & Kuwo kale)